Cusboonaysiinta Xarunta Saint Paul | Saint Paul Historical
Cusboonaysiinta Xarunta Saint Paul
“Dhammaan waxay ku bilaabantay marka qofka inuu gacmahiisa ka shaqaysiiyo la faro.”
Markii Digtoor Carl S. Miller waxa uu samaynayeycilmi baadhida oo waxa uu qaaday qoraalada gacanta lagu qoro ee diktooraagiisa kimistariga xaga Jaamacada Minnesota, waxa uu u fekeray inay jiraan qaar degdeg ah, fudud, iyo qaab jaban oo lagu naqilo qoraalada qoran iyo kuwa daabacan. Waxa uu ku biiray 3M shaybaadhka cilmi baadhida Juulay 1940. 1944, waxaanu lahayn fursada aanu ku bilowno nidaamka nuqulka taas oo isticmaashay nal macmal ah si loogu wareejiyo aaga khadka madow waraaq gaar ah.
Loolanku waxa uu ahaa in la sameeyo mashiin ku qalabasayn guluubka nalka si loo sameeyo koobiyo badan. Nooci u horeeyay ee sawirka “Thermo-Fax” ayaa la sameeyay 1948. 1949 sarkaal ka tirsanaa Wakaalada Sirdoonta oo booqanayay 3M waxa uu waydiiyay in lagu soo bandhigo Washington D.C. In kasta oo mashiinku uu ciladoobay oo aad u kululaaday, CIA waxay aragtay mustaqbalkeeda oo waxay siisay 3M dalabkeedii u horeeyay ee moodeelka ganacsi.
Mishiinkii koobiga “Thermo-Fax” ee u horeeyay waxa uu ahaa moodeelka sagxada oo wayn. Dedaalada cilmi baadhid dheeraad ah waxay keentay nooca miiska la saaro “Xoghaynta” mashiinka koobiga sanadkii 1955. Labbada moodeelba waxay isticmaaleen warqadda koobiga dahaadhan.
“Mishiinkayaga koobiga iyo warqadda waxay noqdeen walxaha iibka aadka u kobcaya ee 3M ay weligeed suuga gelisay.”
Maamulaha Shirkada 3M Herbert P. Buetow, 1956.
3M waxay samaysay alaabta iyo suuqa waxa uu qabsaday qaybta koobiyaynta ilaa Xerox ay ka samaysay mishiinka koobiga warqadda cad taas oo kama dambaystii beddesha “Thermo-Fax”
1944, 3M waxay iibsatay xuquuqda soo saarida kimikada falooriinta, eray lagu soo saaray 3M. Shaybaadhada cilmi baadhida waxay bilaabeen raadinta isticmaalada isku daradan kaaboonka iyo falooriinta.
Hal maalin sanadii 1953, shaqaalaha shaybaadhka Joan Mullin waxay ku daadisay muunad kabbaheedii marada ahaa ee teniska oo waxay ogaatay inaanay ka muuqanayn. Kama dambaystii cilmi baadhayaasha kale ee shaybaadhka waxay sameeyeen tijaabooyin dheeraad ah ka koobanayasha kimikaad.
Patsy Sherman iyo Sam Smith waxay ka wada shaqeeyeen si ay u horumariyaan ilaaliyaha marada kuraasta “Scotchgard. Waxaa loo adeegsaday warshada dharka 1956, laakiin waxay ku shaqaysay suufka oo keliya. Horumarin badan ayaa ka dambeeyay si loo soo saaro alaab ku shaqayn lahayd dhar aad u fara badan, iska celin lahayd heer-heerka, oo camuuda soo saari lahayd.
Alaabta dib ayaa loo qaabeeyay wakhtiyo badan si loo horumariyo wax qabashada oo wax looga qabto arrimaha caafimaadka iyo deegaanka. “Scotchgard” waa alaab weli aad u guul leh oo leh isticmaalida 100 ee ganacsiga iyo isticmaalka tafaariiqda.
"Thermo-Fax" Demonstration: Bryce L. Clark, midig, eegayaa “Thermo-Fax” mashiinka koobiga ee 1949 ee, ka bilow bidix, William L. McKnight, Richard Carlton, iyo Charles W. Walton. ~ Source: Minnesota Historical Society
Patsy Sherman: Patsy Sherman iyo Sam Smith waxay ka wada shaqeeyeen si ay u horumariyaan ilaaliyaha marada kuraasta “Scotchgard." ~ Source: Minnesota Historical Society
Marjorie Pearson, Summit Envirosolutions, Inc., “Cusboonaysiinta Xarunta Saint Paul
,” Saint Paul Historical, accessed February 19, 2019, https://so.saintpaulhistorical.org/items/show/388.